​काठमाडौँलाई पाँच वर्षमै दक्षिण एसियाको नमूना सहर बनाउने धोको छ- – विद्यासुन्दर शाक्य , एमालेका तर्फबाट काठमाडौँ महानगपालिकाका मेयरका उम्मेदवार
Tuesday,9May, 2017 12:00 AM
तपाईँले काठमाडौँको मेयरमा जित्ने आधार के–के हुन् ?
नेकपा (एमाले)तल–तलसम्म संगठन निकै बलियो भएको पार्टी हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सबै जनताको घर–दैलोमा पुगेको मर्दाको मलामी र बाँच्दाको जन्ती बनेको पार्टी पनि एमाले नै हो । सुख–दुःखमा साथ दिएको पार्टी पनि एमाले नै हो । अहिले महानगवासीसँग एमाले स्पष्ट दृष्टिकोण, नीति, विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रमले मात्र होइन आत्मीयरुपले पनि नजिक छ । त्यसैले उहाँहरु सबैले काठमाडौँको मेयरमा एमालेलाई भोट हाल्नुुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
मैले अघि पनि भने एमालेले लिएको राष्ट्रियताको स्पष्ट अडान, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा एमालेको गरेको काम, एमालेले लिएका नीति, विचार, सिद्धान्त र एमालेले महानगर विकासका लागि अघि सारेको कार्यक्रम अन्य सबै राजनीतिक दलहरुको भन्दा उत्कृष्ट छ । एमाले कसैका छोरी–बुहारी वा ज्वाईँलाई मेयर बनाउने योजना बोकेर चुनावी मैदानमा आएको छैन । काँग्रेस–माओवादीका साथीहरुले गरेको चुनावी तालमेल केका लागि हो भन्ने कुरा तपाईँहरुले स्पष्ट रुपमा बुझ्नु भएको छ । हामी छोरी–बुहारी वा ज्वाईँ होइन संवृद्ध नेपाल बनाउने, सबैले आहा भन्ने महानगर बनाउने योजनासहित चुनावी मैदानमा आएका छौँ । अहिले नेपालमा जहानीय राणाशासन छैन । तर काँग्रेस–माओवादीले जहानीय शासन अझै बाँकी छ भन्ने झल्को दिने गरी चुनावी तालमेल गरेर आफ्ना छोरी–ज्वाईँलाई मेयर–उपमेयर बनाउनका लागि पार्टीमा योगदान गरेका, लामो अनुभव बटुलेका नेता–कार्यकर्तालाई पाखा लगाएका छन् । यो कुरा पनि आम जनताले राम्ररी बुझेका छन् भन्ने मैले ठानेको छु । देशभक्त र राष्ट्रियता कमजोर बनाउने गठबन्धनका पक्षमा नेपाली जनताले मतदान गर्नुहोला भन्ने मैले ठानेको छैन । यो हामीले चुनाव जित्ने अर्को वलियो आधार हो ।
मैले काठमाडौँमा मेयर जित्ने तेस्रो आधार भनेको म दुई–दुई पटक यही महानगरपालिकाका जनताबाट चुनिएको जनप्रतिनिधि हुँ । काठमाडौँको वडा २१ बाट म दुई पटक जनप्रतिनिधि भएँ । पहिलो पटक म वडा अध्यक्ष भएर गरेको कामको मूल्याङ्कन गरेर फेरि ०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा जनताले मलाई भारी मतसहित विजयी गराउनु भयो । मैले त्यतिबेला पनि उहाँहरुले गरेको विश्वासलाई मर्न दिइन् । मेरो कामको मूल्याङ्कन गर्दै पार्टीले पनि मलाई विभिन्न जिम्मेवारी सुम्पिदैँ आएको छ । म दुई दशकदेखि नेकपा (एमाले)को जिल्ला कमिटीमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दै आएको छु । अहिले पनि म एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको सचिवको हैसियतमा छु । महानगरमा मैले नेकपा (एमाले)का तर्फबाट महानगर राजनीतिक संयन्त्रको प्रतिनिधिका रुपमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छु । यसले मलाई महानगर बुझ्न निकै सजिलो भएको छ । महानगरको विकास कसरी गर्ने, महानगर विकासमा के कुराको कमी छ । त्यो सबै मैले बुझेको छु । यो मेरो जित्ने अर्को आधार हो ।
चौथो आधार भनेको काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले नौ महिने सत्ता चलाउँदा गरेका एकपछि अर्को कमजोरीले जनता दिक्क भएका छन् । सरकार कहिले प्रहरी प्रमुखको विषयलाई लिएर त कहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर एकपछि अर्को वदनामी कमाउँदै आएको छ । सरकार सञ्चालन गरेको नौ महिना पूरा भएको छ । तर, अहिलेसम्म यो सरकारले जनतालाई उत्साहित हुने काम केही गर्न सकेको छैन । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला मृत अवस्थामा रहेका सपनालाई व्यूँझाउने काम गर्नुभएको थियो । नेपाली जनता संवृद्धिको सपना देख्न थालेका थिए । नेपाली जनताले देखेका सपना पूरा गर्न महानगरपालिकामा एमाले बाहेको नेतृत्व अहिले नेपाली जनताले कल्पना पनि गर्न सकेका छैनन् । यी सबै आधारले पनि काठमाडौँमा मात्रै होइन देशैभरी एमालेको विजयी सुनिश्ति छ भन्ने कुरा ढुक्कले भन्न सकिन्छ ।
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा तालमेलको चर्चा छ, नीतिगत रुपमा त त्यो सम्भव नहोला भित्री रुपमा तालमेल भयो भने ?
तपाईँको भनाइमा एमालेसँग आत्तिएर काँग्रेस–माओवादीले तालमेलको चरणमा पुगेको हो ?
हो, काँग्रेसले अहिलेसम्म पनि जनताका बीचमा कुनै घोषणपत्र वा प्रतिवद्धतापत्र लैजान सकेको छैन । यसले पनि कांग्रेस कतिसम्म अस्तव्यस्त पार्टी हो भन्ने कुराको प्रमाणित गर्दछ । काँग्रेसकै सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने पनि उसको आफ्नो छुट्टै भिजन नै छैन । एमालेले अघि सारेकै कार्यक्रमहरु काँग्रेसको घोषणापत्रमा छन् । यसकारण पनि हामी दावाका साथ भन्न सक्छौँ कि भिजन भएको, महानगरलाई महानगर बनाउने सपना बोकेको पार्टी एमाले नै हो । अहिले हामी स्पष्ट योजनासहित जनताको घर–दैलोमा पुगेका छौँ । उहाँहरुले पनि खुलेर एमालेको पक्षमा समर्थन जनाउनु भएको छ । यसले हामी थप उत्साहित भएका छौँ ।
एमालेले काठमाडौँमा उपमेयर महिलालाई नदिई राप्रपासँग तालमेल गरेकोमा कांग्रेस माओवादीले विरोध गरेका छन् नि ?
इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनताले महिला प्रधानन्यायाधीश पाएका थिए । तर, काँग्रेस र माओवादीलाई त्यो कुराको चित्त बुझेन । उनीहरुले अपमानित ढंगले उहाँमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएर आम नेपाली महिलामाथि अपमान गरे । शुक्रवार मात्रै न्यायधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराको एकल इजालसले उहाँलाई काममा फर्किनु भनेर फैसला गरेपछि फेरि काँग्रेस–माओवादीका साथीहरु आत्तिएर विभिन्न खाले हर्कतमा जुटेका छन् । यसरी महिला प्रधानन्यायाधीशलाई अपमानित ढंगले हटाउने साथीहरुले यो गलत हो भनेर लड्ने एमालेलाई महिला विरोधी भनेर आरोप लगाउन मिल्छ ? म काँग्रेस–माओवादीका साथीहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । महिला शसक्तिकरण र सामाजिक न्यायका लागि एमाले जति अरु कुनै पनि पार्टी लडेका छैनन् । सबै स्थानीय तहमा मेयर वा उपमेयर मध्ये एक महिला अनिवार्य गर्ने व्यवस्था एमालेलेकै पहलमा भएको हो । महिला राष्ट्रपति र महिला सभामुख एमालेकै पालामा भएको हो, त्यो कुराको पनि हामी स्मरण उहाँहरुलाई गराउन चाहन्छौँ । अहिले कुनै नेताका छोरी–बुहारीलाई मेयर बनाउन अप्राकृतिक गठबन्धन गर्ने साथीहरुले हामी महिलामैत्री हौँ भनेर गर्व नगर्दा हुन्छ । उहाँहरुले महिला होइन, नेताका छोरी–बुहारीलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ । हामीले संगठनमा काम गरेका, अनुभव भएका महिलालाई प्रथामिकता दिएका छौँ ।
अहिलेसम्म चुनाव प्रचार–प्रसारका क्रममा तपाईँले के–कस्ता प्रतिवद्धता लिएर जनताका बीचमा जानु भएको छ ?
ड्डअवश्य, म मेयर भएपछि आर्थिक तथा सामाजिक न्यायमा आधारित नमुना शहर बनाउने छु । काठमाडौँ र सहरलाई सहयोग गर्ने वा लगानी गर्नेलाई आकर्षित तथा व्यापारमैत्री बाताबरण बनाउने छ । अहिले दैनिक हजारौँ युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ । म त्यसलाई कम गराउने समय सापेक्ष रोजगारमूलक वातावरण निर्माण गर्नेछु । युवाहरुका लागि रोजगारमूलक तालिम दिने र ठाउँ–ठाउँमा अनलाइन रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्नेछु । त्यसैगरी मझौला व्ववसाय तथा साना व्यवसाय सुरु गर्नेहरुलाई (स्टार्ट अफ) लगानीमैत्री विनियमहरु बनाइने छ । सहरका मुख्य–मुख्य केन्द्रमा (इन्टरपेनर हव) को स्थापना गर्नेछु ।
स्थानीय तथा आगन्तुकहरुको लागि ठुला होटेल रेस्टुराँ, सपिङ मलहरु, डे र नाइट मार्केटहरु ठाउँ–ठाँउंमा स्थापना गर्नेछु्र ।